Fotodrafitsara fampandrosoana: misy misompatra ny fanamboarana ny lalana RN44 | NewsMada
Fotodrafitsara fampandrosoana: misy misompatra ny fanamboarana ny lalana RN44
Mampanahy ary mety hiantraika amin’ny tetikasa. Niraisan’ny rehetra fa tena ankasomparana sy fanakantsakanana ny hahavitan’ny fanamboaran-dalana RN44 ny tranga miseho any amin’iny faritra iny.
“Fandrobana ny orinasa, toy ny halatra sy ny famotehana ny fitaovam-piasana. Halatra ny kojakoja samihafa, toy ny solika na ny motera. Fakana ny vy amin’ny arofanin’ny tetezana… Efa niseho avokoa izany ary tena tsy milamina mihitsy”, hoy ny eo anivon’ny kaominina Morarano Gara, Rafamantanantsoa Léon. Nanamafy izany ny mpandrindra ankapobeny ny tetikasa, Rakotomalala Vero. “Ho tara ny fahavitan’ny asa ary mety hitsahatra hatramin’ny tetikasa izany raha mbola mitohy ny tahaka izao”, hoy izy. Antony nanaovana atrikasa teo amin’ireo tompon’andraikitra samihafa any an-toerana izany ny herinandro teo.
Handray fepetra hentitra ny zandary
Nahitana ny avy amin’ny faritra, ny prefektioran’Ambatondrazaka, ny kaominina manodidina ny RN44 sy ireo mpitandro filaminana ary koa ny avy amin’ny orinasa sy ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MaTP). Teo koa ny avy amin’ny PACT.
Nivoitra tamin’ny fehinkevitra ny handraisan’ny rehetra andraikitra sy ny hanatanterahana izany. “Mampitandrina izahay fa tsy hihemotra fa handray ny fepetra hentitra rehetra ary hamongotra hatramin’ny fakany ireo mbola mikasa ny hanakana ny tetikasa”, hoy ny kaomandin’ny kaompania, Moramanga, ny kapiteny Razafimamonjy Jean Richard.